शबाथ-दिन - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
628 हेरेको संख्या
परमेश्वरले मान्नू भनेर आज्ञा गर्नुभएको सृष्टिकर्ताको सम्झनाको दिन, शबाथ-दिन । यो विश्रामको दिन त हो, तर त्योभन्दा पहिला योचाहिँ सम्पूर्ण थोक सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरको सृष्टिलाई सम्झना गर्ने दिन हो । परमेश्वरले सृष्टिकर्ताको सम्झनाको दिन, शबाथ-दिनलाई विशेष दिनको रूपमा छुट्ट्याउनुभएर १० आज्ञामध्ये चौथो आज्ञाको रूपमा तोकिदिनुभयो ।
“शबाथ-दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नू ।”प्रस २०:८
परमेश्वरको प्रजा हो भने परमेश्वरको इच्छाअनुसार शबाथ-दिन पवित्र रूपले मान्नुपर्छ । शबाथ-दिन मानेको छ कि छैन भन्ने कुराद्वारा परमेश्वरले आफ्ना प्रजाहरूलाई छुट्ट्याउनुहुन्छ (इज २०:११-१७; यशै ५६:१-७) ।
त्यसोभए सातौँ दिन शबाथ-दिन कुन बारमा पर्छ होला ?
येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दिनसम्बन्धी अभिलेखद्वारा शबाथ-दिन शनिबार हो भनेर बाइबलले गवाही दिएको छ ।
हप्ताको पहिलो दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नुभएपछि … (सरल नेपाली बाइबल : आइतबार बिहानै)मर्क १६:९
येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दिन हप्ताको पहिलो दिन आइतबार हो । विश्वभरिका ख्रीष्टियानहरूले आइतबारको दिनमा येशूज्यूको पुनरुत्थान मनाउने कारण पनि यही हो । शबाथको भोलिपल्टको दिन आइतबार हो भने शबाथ-दिन निश्चय नै शनिबार हो । त्यसैले येशूज्यू र उहाँको उदाहरण पछ्याएका प्रेरितहरूले आत्मा र सत्यतामा शबाथ-दिन शनिबार माने ।
उहाँ नासरतमा आउनुभयो, जहाँ उहाँ हुर्कनुभएको थियो । उहाँ आफ्नो आदतअनुसार शबाथ-दिनमा सभाघरमा जानुभयो …लूक ४:१६
पावल आफ्नो आदतअनुसार तिनीहरूकहाँ भित्र गए, र तीन सातासम्म धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूसँग बहस गर्दैरहे ।प्रे १७:२
प्रेरितहरूको युगसम्म शबाथ-दिन मानिएको थियो, तर रोमी सम्राट कन्स्टेनटाइनले ई.सं. ३२१मा आइतबारको नियम घोषणा गरेपछि शबाथ-दिन आइतबारको सेवामा परिवर्तन भयो । रोमी सम्राटको राजनीतिक शक्तिले परमेश्वरको व्यवस्था फेरिएकोले वर्तमान समयमा सबै मण्डलीहरूले आइतबारको सेवा गरिरहेका छन् । तर पनि येशूज्यू स्वयम्‌ले स्थापना गर्नुभएको ‘परमेश्वरको मण्डली’ले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था शबाथ-दिन मान्दछ । त्योचाहिँ हामीलाई मुक्ति दिन चाहनुहुने येशूज्यूको वचन परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरूको हृदयमा खोपिएकोले हो ।